Guluf dagaal oo laga dareemayo qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. | gobolada.com
Cabsi xoog leh ayaa soo food saartay dadka shacabka ah ee ku nool caasimada magaalada Muqdisho, kadib markii la dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo sida la sheegay ku wajahan guri uu dagan yahay Senetor Xaaji Muusi Suudi Yalaxow.
Waxaa la arkayaa ciidamo aad u fara badan oo dhaqdhaqaaqyo ka wada dhanka madaxtooyada iyo qeybo ka mid ah Degmada C/casiis, taasoo ku abuurtay cabsi xoog leh dadka dagan Magaalada Muqdisho.
Lama oga xaalada magaalada Muqdisho oo dagaal laga cabsi qabo waxa ay noqon doonto maalinta barito ah, hase yeeshee waxaa muuqda is uruursi ballaaran oo ay labada dhinac wadaan iyo shaki soo kala dhex galay ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ee la qorsheeyey inay weeraraan Muusi Suudi Yalaxow iyo kuwo ay dhici karto inay difaacaan.
Ciidamada AMISOM ayaa loo malaynayaa inay qeyb ka noqdaan weerarka lagu wado in lagu qaado hoyga Senetor Xaaji Muusi Yalaxow.
Qof ka mid ah shacabka ku nool Degmada C/casiis oo la hadlay warbaahinta gobolada.com ayaa sheegay inay dareemayaan saan saan dagaal, isla markaana aysan ogayn xaalada waqooyiga Muqdisho waxa ay noqon doonto bari.